Ziziphi iiMisebenzi zoKuKhula koPhulo lweNdleko?
IMathematika Umhla wokuPhumela
Inkcazo yeMigaqo yeMathe
Imisebenzi yokuxela ibhekiselele amabali okutshintshwa kwezinto eziqhubisayo. Ezi zimbini iintlobo zemisebenzi yokubonakalisa ukukhula okubonakalayo kunye nokubola okubonakalayo . Iinguqu ezine ezine-pesenti zinguqu, ixesha, isixa ekuqaleni kwexesha, kunye nemali ekupheleni kwexesha - udlala indima kwimisebenzi yokubonisa. Eli nqaku lijolise ekusebenziseni imisebenzi yokukhula ngokucacileyo ukuze uqikelele.
Ukukhula okubonakalayo kukuguqulwa okwenzekayo xa inani lemveli liye linyuka ngezinga elifanayo kwixesha elide
Ukusetyenziswa koKhuseleko oluPhambili kwiBomi boBomi :
Imilinganiselo yamanani asekhaya
Ubulungu obongezelelekileyo kwisiza esithandwayo sokunxibelelana kwezentlalo
Umzekelo wokuKhula okuPhumelayo: Ukuthengwa kwiiThft Stores
Ndizisola kukuba ndiyinto eninzi kwaye ndingazi ukuba ndithengise kwiivenkile ezithengayo xa ndingumfundi wekholeji. Uneminyaka elishumi elinesibhozo ndandicinga ukuba izitrato zesibini zenziwe ngamabhokisi emisedare e-musty, iimpahla ezindala ezivela kumntu oshonile. Ekubeni ndibe "ngumxhasi omkhulu" umcebisi ongumhlali ofumana i-$ 80 ngenyanga, ndandifuna ukuthenga iimpahla ezintsha kwivenkile. Ekuhambeni kwemboniso kunye nemiboniso yeetalente kunye namaqela, elinye iqela "elikhulu" lalingumfanekiso wam. Nangona ndingazange ndambethe ingubo yomfazi ofileyo, umoya wam wesidlo wafela khona apho kumdaniso womdaniso.
Emva kokuba ndaphumelele kwaye ndaqala ukuthenga e-Edloe neCho, isitolo esithengisayo, ndafumana umgangatho ophezulu, iimpahla ezikhethekileyo kwixabiso elithengekayo. Ukususela ekuqalekeni kweRest Recession, abathengi baye baba nolwabiwo-mali oluninzi; Izitolo ezithandekayo ziyaziwayo kakhulu kunanini ngaphambili.
Ukukhula kweZiko lokuThengisa
U-Edloe noCha baxhomekeke kumyalezo wezentengiso, inethiwekhi yoluntu yokuqala. Abathengisi abangamashumi amahlanu babethetha abantu abahlanu, kwaye ke ngamnye wabo wabathengi abatsha wathetha abantu abathathu abantu, njalo njalo. Umphathi ubhale ukukhula kwabathengisi bevenkile.
Iveki 0: 50 abathengi
Iveki 1: 250 abathengi
Iveki yesi-2: aba-1,250 abathengi
Iveki 3: abathengi abangama-6,250
Iveki 4: abathengi abangama-31,250
Okokuqala, uyayazi njani ukuba le datha ibonisa ukukhula okubonakalayo ? Zibuze imibuzo emibini.
Ngaba ixabiso liyakhula? Ewe
Ingaba iimpawu zibonisa ukwanda kwepesenti? Ewe .
Indlela yokubala ukunyuka kweepesenti
Ukwanda kwepesenti: (omtsha - Omdala) / (Odala) = (250 - 50) / 50 = 200/50 = 4.00 = 400%
Qinisekisa ukuba ukunyuka kweepesenti kuqhubekayo ngenyanga:
Ukwanda kwepesenti: (omtsha - Omdala) / (Odala) = (1,250 - 250) / 250 = 4.00 = 400%
Ukwandiswa kwamaphesenti: (Omtsha - Omdala) / (Odala) = (6,250 - 1,250) / 1,250 = 4.00 = 400%
Ukunyamekela - musa ukudibanisa ukukhula okubonakalayo kunye nokulinganayo.
Ezi zilandelayo zimela ukukhula okulinganayo:
Iveki 1: 50 abathengi
Iveki yesi-2: 50 abathengi
Iveki 3: 50 abathengi
Iveki 4: 50 abathengi
Qaphela : Ukukhula okuluhlu kubhekisela kwinani elifanayo labathengi (abathengisi abangama-50 ngeveki); Ukukhula okubonakalayo kuthetha ukunyuka kwepesenti eqhubekayo (400%) yabathengi.
Indlela yokubhala umsebenzi wokuPhumela umPhumela
Nantsi umsebenzi wokukhula ocacileyo:
y : Isixa sokugqibela esele siphelelwe ixesha
: Imali yokuqala
x : Ixesha
Ubunzima bokukhula (1 + b ).
Uguquko, b , ipesenti yeenguqu kwisimo se-decimal.
= 50 abathengi
Qaphela : Musa ukuzalisa ixabiso le x kunye y . Ixabiso le- x ne- y liza kutshintshwa kulo msebenzi, kodwa utshintsho lwangaphambili kunye nepesenti zenguqu ziya kuhlala zihlala.
Sebenzisa umsebenzi woKukhula oPhumelayo ukuCwangcisa
Kucinga ukuba ukunyuka kwemali, umqhubi oyintloko wabathengi kwivenkile, iqhubeka iiveki ezingama-24. Bangaphi abathengi beveki abaya kuba nevenkile ngexesha leveki ye-8?
Nenyameko, musa ukuphindaphinda kabini inani labathengi ngeveki 4 (31,250 * 2 = 62,500) kwaye ukholelwa ukuba yimpendulo echanekileyo. Khumbula, eli nqaku liphathelele ukukhula okubonakalayo, kungekhona ukukhula okulinganayo.
Sebenzisa uMyalelo weMisebenzi ukulula.
y = 50 (5) 8 (Abazali)
y = 50 (390,625) (exponent)
y = 19,531,250 (Phinda)
UkuKhuselwa kokuPhumela kwiRevenue Revenues
Ngaphambi kokuqala kwemali, ukufumana ingeniso yenyanga yesitoreji kuhamba nge-$ 800,000.
Imali yengeniso yeholide iyonke inani elingu-dollar inani abathengi abachithayo kwivenkile kwimpahla kunye neenkonzo.
Ngaphambi kokunciphisa imali: $ 800,000
1 inyanga emva kokunciphisa imali: i-$ 880,000
Kwiinyanga ezi-2 emva kokunciphisa imali: i-968,000 zamaRandi
Kwiinyanga ezi-3 emva kokunciphisa imali: i-R17,180
Kwiinyanga ezine emva kokunciphisa imali: i-$ 1,288,408
Sebenzisa ulwazi malunga neenzuzo ze-Edloe kunye neCo ukugqiba 1 -7.
Ziziphi iimali zokuqala?
Iyintoni into yokukhula?
Ukukhula kobugcisa bokubonakaliswa kweempawu
Bhala umsebenzi ocacileyo ochaza le nkcukacha.
Bhala umsebenzi ukuchaza kwangaphambili inyanga ngenyanga yesihlanu emva kokuqala kwemali.
Ziyintoni i-revenue revenue ngenyanga yesihlanu emva kokuqala kwemali ?
Kucinga ukuba i-domain yale misebenzi yokubonakalisa iinyanga ezili-16. Ngamanye amagama, cinga ukuba uqoqosho luya kuhlala ixesha eli-16. Ngeliphi iphuzu liya kufumana imali engaphezu kwezigidi ezintathu zeedola?
Umsebenzi oPhumelayo kunye nokuCima
Ukucwilisa Abaxhasi-Amandla eMveliso
Ixabiso elilindelekileyo lokuSasazwa kweBinomial
Inkqubo Yokwenziwa Kweendawo
I-Tsunamis ezili-10 ezibulalayo
Imithetho emithathu ye-Architecture
Indlela yokwenza i-Aspirin - Acetylsalicylic Acid
Ngaba Ndimele Ndijoyine Ubudlelwane / I-Sorority?